Talaado, Juun 14, 2011 Axad, Sebtembar 30, 2012 Douglas Karr
Sidaad horeyba u ogaan laheyd, waxaan leenahay idaacad todobaadle ah oo si toos ah jimce walba ujirta 3PM. Ka faa'iidaysiga BlogTalkRadio, bandhiggaas ayaa markaa la keydiyaa oo Podcast-ka loo riixaa iTunes. Ka baxsan tayada maqalka, BlogTalkRadio wuxuu sii wadaa inuu ka badiyo filashadeyda.
Markaad dhex mushaaxdo internetka wixii talo ah ee ku saabsan dejinta, waxaa jira macluumaad badan oo ku saabsan softiweerka sida Maqalka or Garaashka si aad u horumariso codkaaga, ciyaartoydu si ay ugu dhexjiraan goobtaada, qalab aad wax ku iibsato, ka dib markaa waa inaad ku dhex foorarsataa diiwaangelinta iyo ku soo dejinta barnaamij kasta oo iTunes ah. Tani waa shaqada oo aad u badan kooxdeena… sidaas darteed BlogTalkRadio waa xalka ugu fiican.
Iyadoo BlogTalkRadio, waxa kaliya ee aan u baahanahay waa a makarafoon wanaagsan iyo Skype inaad la xiriirto martida actually runti xitaa uma baahnid kuwaas, waxaad la xiriiri kartaa taleefankaaga oo waxaad diyaar u tahay inaad tagto! BlogTalkRadio waxay sii deyneysaa aalad cusub, oo kuu oggolaaneysa inaad si fudud u maamusho bandhiggaaga, martidaada, iyo maqal dheeri ah oo aad soo qaadato. show (muuqaal cabsi leh).
Sida bandhig B2B ah, istiraatiijiyaddeennu aad ayey uga duwan tahay barnaamijyada la xiriira macaamiisha:
Kama daba soconno tiro badan oo dhagaystayaal ah want waxaan dooneynaa inaan kobcinno dhagaystayaal u gaar ah suuq geynta iyo xirfadleyda warshadaha.
Waxaan raadineynaa suuqgeynta iyo hogaamiyaasha teknolojiyadda si aan ugu xirno bandhigga. Maaha xeelad uun in magacyo waawayn lagu yeesho bandhigga dhagaystayaal badan, sidoo kale waa istaraatiijiyad lagu hubinayo in magacyadeenna si joogto ah loogu xuso isla wareegyadaas.
Waxaan ku raad joognaa xirfadlayaal suuqgeyn ah oo ka shaqeeya shirkadaha waaweyn. Si kale haddii loo dhigo, waxaan beegsaneynaa macaamiisha mustaqbalka inay ka soo muuqdaan bandhigga! Tani waxay u muuqan kartaa mid xun, laakiin gabi ahaanba way shaqeysaa. Waxaan sii wadi doonnaa inaan keeno hogaamiyaasha suuqa iyo Fortune 500 shirkadaha bandhigga. Iyagu way qaddarin doonaan labadaba dhagaystayaashu sidoo kale waxay na siinayaan fursad aan ku soo bandhigno waxa aan ku samaynno iyaga.
Maaddaama fayl-gareynta aysan sahlaneyn, qoraayo badan, baloog-qorayaal, iyo hoggaamiyeyaasha warshadaha ayaa ka boodi doona fursadda ay ku joogaan bandhigga. Ma jiraan wax badan oo warbaahin ah oo halkaa ka jira maaddaama ay jiraan baloogyo… markaa fursadda in la maqlo aad ayey uga badan tahay. Waxay ku jirtaa dantooda ugu fiican (iyo taada) inay ku soo galaan bandhigyadaas.
Taasi waxay tiri… ma jiidanayno qof bandhigga si aan si adag u iibino. Waxaan u fidineynaa dhagaystayaal si ay kor ugu qaadaan naftooda, shirkadooda iyo istaraatiijiyadooda sidoo kale waxaan siino talo ama wadahadal ku saabsan. Haddii martidu qadarinayso jawaab celintayada, marwalba waxaa jira fursad lagu sii wado xiriirka qadka.
Waxaan ku aqoonsaneynaa bartilmaameedyada Podcast:
Bixinta foomka xiriirka boggayaga. Xirfadleyda xiriirka bulshada waxay maalin walba nala soo xiriiraan iyagoo leh garoonno - in badan oo ka mid ahi waa fursado aad u fiican bandhigga.
Raadi baloogyada adoo adeegsanaya raadinta blog, PostRank iyo Technorati ku hadla isla mawduucyada.
Raadi Podcasters kale barnaamijyada sida iTunes iyo Stitcher.
Raadi qorayaal buugaag dhowaan la soo saaray oo ku saabsan mowduucyada aan ka hadalno. Qorayaashu waxay si isdaba joog ah isugu dayayaan inay erayga ku soo saaraan buugaagtooda Podcasts-na waxay siiyaan fursad weyn. Qorayaasha badankood waxay ku boodi doonaan fursadda. Raadi boggooda oo ku xir iyaga.
Ku dhiirrigeli barnaamijka isku-darka showga raadiyaha ee bartaada iyo bogagga bulshada. Podcasts waxay siisaa fursad weyn dadka inay labadaba shaqeeyaan oo ay dhagaystaan… wax uusan blog soo bandhigin. Dhagaysiga sidoo kale waa talaabo weyn oo kor uqaadida aqrinta… maadama aad maqasho codadka codka. Waxay ka caawin kartaa dhagaystayaashaada inay kugu kalsoonaadaan si dhakhso leh.
Jun 15, 2011 saacadu markay ahayd 9:35 AM
Jeclow bandhiggaaga, marwalba kuma qaban kartid si toos ah, sidaas darteed waa wax lagu farxo hoos u dhigida boodhadhka, oo dhageyso markaan haysto waqti.
Waxaan ku dhajinayay adoo adeegsanaya rikoodh gacanta lagu hayo iyo Audacity in yar, laakiin BlogTalk Raadiyaha ayaa aad uga fudud. Weli waan saxaa barnaamijka ugu dambeeya ka hor intaanan u gelin iTunes-ka waxaan bilaabay inaan ku daro xiriiriye qaar ka mid ah barnaamijyada caanka ah ee soo jeedintayada.
Waxaan ka baran doonnaa adiga markii aan isku dayeyno inaan u dhisno dhagaystayaal barnaamijkeenna ganacsiga yar yar Arbacada markay tahay 10:30.